"छुचुन्द्रोको टाउकोमा चमेलिको तेल" ---
कथाको पात्र पंक्तिकारको नजरमा धेरै छन् । ब्यक्ति बिषेषलाई जन्तुसंगको तुलना वाञ्छनीय हुन जान्छ। तसर्थ यहाँ छुचुन्द्रे प्रवृति कै उपर कथा केन्द्रित रहनेछ।
पौराणिक कथा अनुसार पुजिदै आएको गणेशको वाहन मुसो यानिकी छुचुन्द्रो। दैवी शक्ति होस वा आलौकिक पुजिएको छ तर गुलाम बनाएर। सर्वप्रथम यहाँ प्रष्ट हुनुस आस्था प्रती कुनै दुराभाष र पुर्वाग्रह राखिएको छैन नितान्त यो ब्यांग्यात्मक मनोकथा हो। वाहन यानिकी दास, नोकर, भरिया जे जसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। भरिया त आखिर भरिया नै होनि होईन र ? जसरी नोकर नोकर नै हो उस्लाई मालिकको दर्जा त दिईएको छैन नि।
यदि आफ्नो स्वार्थ अनुरुप पुजिएको भए पनि नोकर मालिक त बन्दैन । दुलो भित्रबाट आफैलाई मालिक सोच्दैमा हुने पनि होइन। तर यहाँ हल्का कथा मोडिन्छ कल्पना गर्नुस एकपटक धान चोर दुर्गन्धित मुसो (छुचुन्द्रो) ले अरु साथिलाई झुक्याएर आफैलाई मालिक यानिकी भगवान घोषणा गर्ने दुस्साहस गरे के होला ?
निस्चय नै छुचुन्द्रो कै हुलबाट बिरोध आउन सक्छ। केहिले जिन्दावाद भन्दै जयजयकार गर्लान् त केहीले मुर्दावाद भन्दै पुत्ला जलाउलान। स्वेच्छाचारीताका कारण छुचुन्द्रोले श्रीपेच लगाएर आफै राजगद्दी सम्हाले कसो होला ?किचडबाट निस्केको छुचुन्द्रो आफै डुङडुङ्ग गनाएर बिजुलिको पोलमा झुन्डिदैमा मुलुक सुगन्धित कसरी होला ?
प्रसंगबस नेपालको राजनीतिमा पनि एउटा छुचुन्द्रोले श्रीपेच लगाउने दुस्साहस गर्दैछ।पक्ष-बिपक्षमा मत बाँढिएको छ।नोकरले मालिक बन्न नहुने भन्ने होईन तर एक छुचुन्द्रोले अर्को छुचुन्द्रोको खुट्टा तान्ने प्रवृती झन खतरनाक बन्दैछ। छुचुन्द्रोको एक हुल समर्थनमा र अर्का हुल बिरोधमा उत्रिएको छ। चाँ चाँ र चुँ चुँ गर्दै आपस मै लड्दैछन।
यी दुई गुटको कारण दास मालिक बन्ने संघर्ष यानिकी मुटु कमाउने जनयुद्धको उपलब्धि धरासयी बन्दैछ। आफैमा लुछाचुडी गर्ने छुचुन्द्रोको जमातलाई लामो संघर्ष र बलिदानी मार्फत प्राप्त उपलब्धि अनि पार्टी एकता पछिको दुईतिहाई आज न गन्ध न सुगन्ध "छुचुन्द्रोको टाउकोमा चमेलीको तेल" सावित भएको छ।